तपाइँ मकर राशि हो ? त्यसो भए जन्नुहोस तपाइँको स्वभाव र भविष्य कस्तो हुन्छ ?
काठमाडौँ। मकर राशिका मानिसहरु मेहनती, समर्पित र बफादार हुन्छन। उनीहरुको स्वामी शनि ग्रह हो, जसको कारणले उनीहरु महान अनुशासनशील हुन्छन। यस राशिका मानिसहरू जुन गतिविधिमा संलग्न हुन्छन त्यसमा शीर्ष स्थानमा पुग्छन। उनीहरु अत्यन्तै सावधानी र दृढ दृष्टिकोणबाट अगाडी बढ्छन।
उनीहरु आफ्नो दृष्टिकोणको बारेमा सतर्क हुन्छन। उनीहरु आफ्नो प्रगति र समृद्धिको लागि कडा परिश्रम गर्छन र कुनै पनि प्रकारका सजिलो छोटकरी तरिकालाई घृणा गर्दछन। उनीहरुलाई मानिसहरुले कठोर र घमण्डी सोच्छन तर वास्तविकतामा उनीहरु विनम्र र पोषक विचारधाराले ओतप्रोत हुन्छन।
जब उनीहरुको चरित्रको दोस्रो पक्षको बारेमा थाहा पाइन्छ तब उनीहरुको प्रेम र हेरविचारको पक्ष पनि घाम जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ। उनीहरू आफ्नो काम र महत्वाकांक्षालाई शीर्ष स्थानमा पुर्याउन छुट्टीको दिन पनि काम गर्न अन्कनाउदैनन। उनीहरुको जिम्मेवारीको भावना र दृढ संकल्प अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, र उनीहरुमा कुनै पनि समस्यालाई सजिलै हल गर्न सक्ने खुबी हुन्छ।
उनीहरु अत्यन्तै व्यवहारिक हुन्छन र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि जिद्दी हुन पनि सक्छन। उनीहरुले आफ्नो कडा मेहनतको फल प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा र पैसाको रूपमा पाउँछन्। । मेहनती, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, सहिष्णु, धैर्यवान, र विश्वसनीय मकर राशिका मानिसहरु कसैसँग कहिल्यै पनि कुनै पनि चीजको माग राख्दैनन्।
उनीहरु अनुशासित हुनुको साथै सबै कठिनाईहरु स्वयमले सहन्छन र आत्मकेन्द्रित मार्गको खोजीमा रहन्छन। उनीहरुमा प्राकृतिक रुपमा नै कर्तव्य, निस्वार्थता र भक्तिको भावना हुन्छ। उनीहरु आफ्नो उद्देश्यको दृढताको लागि प्रशंसित हुन्छ। यस किसिमको व्यवहारले उनीहरुलाई मूडी र आत्मविनाशकारी बनाउँछ। तर पछि उनीहरुले आफ्नो अनुभवको कारण आदर पाउँछन्।
उनीहरुको स्वामी ग्रह आध्यात्मिक शनि हो। उनीहरुले आफूलाई उच्च स्तरमा निर्धारण गर्छन र आफ्नो निजी स्थान या व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि छुट्याएका समय अरु सँग साझा गर्न चाहदैनन।
आफ्नो लागि गरिएको समयको खोजीको क्रममा उनीहरुको निजी र सार्वजनिक व्यवहारको बीचमा भिन्नता पत्ता लगाउन सकिन्छ। मकर राशिका व्यक्ति चतुर व्यापारी बन्न सक्छन जसले हतारमा निर्णय लिदैनन। उनीहरु आफ्नो जीवन साथी पनि आफू जत्तिकै सक्षम होस् भन्ने चाहन्छन। उनीहरु शैक्षिक, कृषि, प्राचीन वस्तुहरु आदिका क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्।
यो राशि चक्रको सबैभन्दा स्थायी राशि चिह्न हो। उनीहरु आफ्नो साथीको सुरक्षा, आराम र चिरस्थायी कामना गर्छन। उनीहरु १२ राशिमध्ये सबैभन्दा बढी भरोसा गर्न लायकका हुन्छन। एजेन्सी
दुनियाकै खतरनाक रेलवे, जसले खायो १ लाख २० हजार मानिस
स्वस्थ जीवन जिउन कुन उमेरका मानिसले कति समय सुत्ने ? जानिराखौँ